Lactational Mastitis (မိခင်နို့တိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သောရင်သား ရောင်ရမ်းခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း » မိခင်ကျန်းမာရေး » Lactational Mastitis (မိခင်နို့တိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သောရင်သား ရောင်ရမ်းခြင်း)
Lactational Mastitis (မိခင်နို့တိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သောရင်သား ရောင်ရမ်းခြင်း)
Lactational Mastitis (မိခင်နို့တိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သောရင်သား ရောင်ရမ်းခြင်း) ကဘာလဲ။
နို့တိုက်သောကြောင့် ရင်သားရောင်ခြင်းဆိုသည်မှာကလေးကိုမိခင်နို့ တိုက်နေတဲ့ကာလမှာရင်သားတွင် ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် နာခြင်း၊ နီခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ကြွက်သားများကိုက်ခဲခြင်းနှင့် မအီမသာဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းက ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် ပထမဆုံးခြောက်ပတ်အတွင်းမှာအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Lactational Mastitis (မိခင်နို့တိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သောရင်သား ရောင်ရမ်းခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့အချက်တွေကိုလျှော့ချခြင်းနဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်
Lactational Mastitis (မိခင်နို့တိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သောရင်သား ရောင်ရမ်းခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
-နာခြင်းသို့မဟုတ် ပူခြင်းကိုတောက်လျှောက်ခံစားရခြင်းသို့မဟုတ် နို့တိုက်စဉ် ခံစားရခြင်း
-အဖျား ၁၀၁ နဲ့ ၁၀၁အထက် ဖျားခြင်း
ဒီလိုရင်သားရောင်ခြင်းဟာများသောအားဖြင့် နို့တိုက်တာရဲ့ အစောပိုင်းအပတ်တွေမှာအဖြစ်များပေမယ့် နို့တိုက်နေချိန်ကာလတစ်လျှောက်လုံးဘယ်အချိန်မဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုရောင်ခြင်းဟာရင်သားတစ်ဖက်ထဲကိုပဲဖြစ်စေတာများပါတယ်။
Lactational Mastitis (မိခင်နို့တိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သောရင်သား ရောင်ရမ်းခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
နို့တိုက်ခြင်းဆိုတာဟာသေချာသင်ထားရတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုပါပဲနည်းလမ်းမှန်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ တိုက်ပါကရင်သားထဲမှာနို့တွေကျန်နေပြီးရင်သားရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အခြားအကြောင်းအရာများကတော့
-နို့ချောင်းပိတ်ခြင်း။ တကယ်လို့ နို့တိုက်ချိန်မှာအကုန်ကုန်သွားအောင်မတိုက်လိုက်ပါကသင့်ရဲ့နို့ချောင်းတွေဟာပိတ်နေတတ်ပြီးနို့တွေ့စုပြီး ရင်သားပိုးဝင်ခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။
-ဘတ်တီးရီးယားပိုးများရင်သားထဲကို ဝင်ရောက်ခြင်း။ သင့်အရေပြားပေါ်မှာရှိသောဒါမှမဟုတ် သင့်ကလေးပါးစပ်ထဲမှ ပိုးမွှားများဟာသင့်အရေပြားရဲ့ ပြဲတဲ့နေရာနို့သီးခေါင်းမှာကွဲတဲ့နေရာရှိပါက ၎င်းနေရာတွေကနေ နို့ပြွန်တွေဆီကိုပိုးမွှားတွေဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ရင်သားထဲမှာနို့တွေစုနေခြင်းကုန်အောင်မတိုက်ခြင်းကြောင့် အဲ့ဒီနေရာဟာဘတ်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေပေါက်စေတဲ့နေရာကြီးဖြစ်နေပါမယ်။ သင့်ရဲ့ နို့ထဲမှာဘတ်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိတာမို့ သင့်ကလေးဆီကို ပိုးဝင်ခြင်းကိုတော့ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Lactational Mastitis (မိခင်နို့တိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သောရင်သား ရောင်ရမ်းခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
-နာနေသောသို့မဟုတ် ကွဲနေသောနို့သီးခေါင်းရှိခြင်း၊ ရင်သားရောင်ခြင်းဟာအရေပြားပေါက်ပြဲတာမရှိပေမယ့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
-ဘော်လီ ခပ်ကျပ်ကျပ်ဝတ်ခြင်း၊ ခါးပတ်ကိုတင်းနေအောင်ပတ်သောကြောင့် ရင်ဘတ်တွင်ဖိအားများခြင်း၊လေးလံသောအိတ်များသယ်ခြင်း ၎င်းတို့မှ နို့စီးဆင်းမှုကိုတားထားသလိုဖြစ်စေပါတယ်။
Lactational Mastitis (မိခင်နို့တိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သောရင်သား ရောင်ရမ်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရင်သားရောင်ခြင်းကိုသင့်ဆရာဝန်မှ စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်း၊ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်တဲ့ ဖျားခြင်း၊
နောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ခုကတော့ သပ်ပုံစံရှိတဲ့နီရဲနေတဲ့ နေရာဟာနို့သီးခေါင်းဘက်ကို ညွှန်နေသလိုပုံစံရှိပြီးထိလိုက်ပါကနာပါလိမ့်မယ်။ သင့်ဆရာဝန်က သင့်မှာရင်သားပြည်တည်နာမရှိဘူးဆိုတာကိုသေချာဖို့အတွက် ကြည့်ပါမယ်။ ရင်သားပြည်တည်နာဆိုတာဟာရင်သားရောင်ခြင်းကိုသေချာကုသမှုမပေးပါက ဖြစ်တတ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ပိုးဝင်ခြင်းကဆိုးပါကသင့်ဆရာဝန်က သင့်ရဲ့နို့ရည်ကိုအကောင်ဖောက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ ဘယ်ပိုးသတ်ဆေးကအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ရှားပါးတဲ့ ရင်သားကင်ဆာတစ်မျ ိုးဖြစ်တဲ့ ရောင်တတ်သောရင်သားကင်ဆာမှာလည်းရင်သားရောင်ခြင်းနီရဲ
သင့်ဆရာဝန်က ရောဂါရှာဖို့အတွက် ရင်သားဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ဖို့အကြံပေးပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ သင်ကပိုးသတ်ဆေးကိုရက်စေ့ သောက်ပြီးတာတောင် ရောဂါလက္ခဏာတွေကျန်နေသေးပါကသင့်ကိုအသားစယူပြီးစစ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ သင့်မှာရင်သားကင်ဆာရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့လိုပါမယ်။
Lactational Mastitis (မိခင်နို့တိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သောရင်သား ရောင်ရမ်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
-ပိုးသတ်ဆေးပေးခြင်း။ ရင်သားရောင်ခြင်းကိုကုသမှုအတွက် ပိုးသတ်ဆေးကို ၁၀ရက် မှ ၁၄ရက်လောက်ထိ ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ကပိုးသတ်ဆေးစသောက်ပြီး ၂၄နာရီမှ ၄၈နာရီအတွင်း သက်သာသလိုခံစားရမှာပါ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ်
ထပ်ဖြစ်မလာအောင် ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဆေးလုံးတွေအကုန် လုံးကိုသောက်ပစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
-အနာသက်သာဆေးများပေးခြင်း။ သင့်ဆရာဝန်က အနာသက်သာဆေးတွေဖြစ်တဲ့ acetaminophen, ibuprofen တို့သောက်ဖို့ပြောပါလိမ့်မယ်။
-နို့တိုက်ခြင်းနည်းလမ်းများကိုချိန်ညှိပေးရန်။ နို့တိုက်တဲ့အချိန်မှာသင့်ရင်သားမှနို့များကို အကုန်ကုန်အောင်တိုက်ရန်နှင့် သင့်ကလေးကို သေချာပုံစံမှန် ထားနိုင်ရန်။ သင့်ဆရာဝန် က သင့်ရဲ့ နို့တိုက်တဲ့ပုံစံကို ကြည့်မယ် ဒါမှမဟုတ် အကူအညီရနိုင်ဖို့အတွက် နို့တိုက်နည်းကို သင်ပေးမယ့်သူတွေဆီကို လွှဲပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
-ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ အနားယူရမယ်။ ဆက်ပြီးနို့တိုက်ရမယ် ပြီးလျှင် ရင်သားပိုးဝင်ခြင်းကိုတိုက်ဖို့ ရေအများကြီး သောက်ရပါမယ်။
တကယ်လို့ ရင်သားရောင်ခြင်းဟာ ပိုးသတ်ဆေးသောက်ပြီးတာတောင် မပျောက်သွားပါက သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ထပ်ပြီး သွားပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါမှာ တစ်ခြား ဘာတွေထပ်စစ်ရမယ် ဘာတွေလိုမယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်က ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပါ။
နို့တိုက်သောကြောင့်ရင်သားရောင်ခြင်း ကို သက်သာအောင်ကူညီနိုင်မယ့် လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက ဘာတွေလဲ။
နို့တိုက်သောကြောင့် ရင်သားရောင်ခြင်းကို သက်သာစေမယ့် လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးတွေကတော့
-သင်ကလေးက ဗိုက်ဆာနေသမျှ နို့ကို တိုက်နိုင်သမျှ တိုက်ပေးပါ။
-အနားယူနိုင်သမျှယူပါ။ အိပ်ယာထဲမှာကလေးနဲ့ အတူလှဲအိပ်ပြီးနေခြင်းနဲ့ နို့တိုက်ခြင်းကို မကြာခဏ လုပ်လို့ရပါတယ်။
-နို့မတိုက်ခင် ရင်သားမှာနို့တွေပြည့်လျှံလာတာကို ရှောင်ပါ။
-သင်နို့တိုက်တဲ့ပုံစံကို မကြာခဏ ပြောင်းပါ။
-တကယ်လို့ နို့ကို ကုန်အောင်တိုက်လို့မရဘူးဆိုရင် ရင်သားကို ခပ်နွေးနွေးအစနဲ့အုပ်ပေးခြင်း ဒါမှမဟုတ် ရေနွေးနဲ့ ရေချိ ုးခြင်း၊ နို့များ ညှစ်ထုတ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
-အထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ ဘရာစီယာ ကောင်းကောင်းဝတ်ပါ။
တကယ်လို့ သင့်မှာ ရင်သားရောင်ခြင်း ရှိပါက နို့တိုက်ခြင်းကိုဆက်လုပ်ခြင်းနဲ့ ပိုးဝင်ခြင်းကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ပိုးဝင်တဲ့ရင်သားဘက်မှာ နို့တိုက်ခြင်းဖြင့် အရမ်းနာကျင်ပါက ဒါမှမဟုတ် ကလေးက အဲ့ဒီဘက်ကို မစို့ဘူးဆိုပါက နို့တွေကို လက်နဲ့ ညှစ်ထုတ်ခြင်း၊ စက်နဲ့ညှစ်ပေးခြင်းတို့ ပြ ုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ကလေးနဲ့ နို့တိုက်မှု ပြ ုလုပ်ခြင်းမှာ အကောင်းဆုံးအခြေအနေနဲ့စနိုင်ဖို့ ပြီးတော့ နို့ရောင်ခြင်းတွေမဖြစ်ဖို့အတွက် နို့တိုက်ခြင်းအထူးပြ ုညွှန်ကြားပေးနိုင်မယ့် လူများနဲ့တိုင်ပင်ပါ။ သူကနေမှ နို့တိုက်ပုံ တိုက်နည်း တွေကို သေချာ အကြံပေး သင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ နို့ရောင်ခြင်းဖြစ်လာမယ့် အခွင့်အရေးတွေလျော့ကျဖို့အတွက် အောက်ပါ အချက်များကို လိုက်နာနိုင်ပါတယ်
-နို့တိုက်စဉ်မှာ သင့်ရင်သားမှ နို့များကို အကုန်ကုန်အောင်တိုက်ပါ။
-နို့တိုက်စဉ်မှာ သင့်ကလေးကိုနို့တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်ကို မပြောင်းခင် တစ်ဖက်ကို ကုန်အောင်တိုက်ပေးပါ။
-နို့တိုက်ချိန်မှာ ပုံစံကို ခဏခဏပြောင်းပြီး တိုက်ပေးပါ။
-သင့်ကလေးနို့စို့ချိန်မှာ ကလေးကသေချာစို့လားဆိုတာ သေချာအောင်လုပ်ပါ။
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mastitis/basics/definition/con-20026633. Accessed 15 Jan 2017
Mastitis: Causes, Symptoms, and Treatments. http://www.medicalnewstoday.com/articles/163876.php. Accessed 15 Jan 2017
Lactational mastitis. http://www.uptodate.com/contents/lactational-mastitis. Accessed 15 Jan 2017